राजनीति « Light Nepal
काठमाडौं, २२ पुष । नेपाल कम्पुनिष्ट पार्टीका स्थायी कमिटि सदस्य तथा वरिष्ठ नेता बामदेव गौतम पार्टी भित्र निकै खरो स्वभावका नेता मानिन्छन् । आफुलाई लागेको कुरा प्रष्ट भन्ने उनको बानी
१२ वर्ष युद्धपछि देशले के पायो, देश कता गयो?
भोजराज घोडासैनी / १९ दिने जनआन्दोजनले पुस्तौपुस्ता चली आएको शाही शासन मात्रै ठेगान लाएन १०वर्ष लामो सशस्त्र युद्धलाई पनि बडार्यो । जसबाट देशबासीले शान्तिको सास फेरेका थिए । फलस्वरूप अन्तरिम
यसरी प्रयोग हुँदैछन् प्रम ओली, आफ्नै परम्भक्त भन्नेहरुबाटै हुँदैछ ठुलै षडयन्त्र
रुपनी जि.एम । २५ असोज, काठमाण्डौ ।पछिल्लो समय देशको कम्युनिष्ट राजनीति निकै चर्चामा पुगेको छ । पार्टीभित्रको एकता, वामदेव गौतम उम्मेदवार हुने बिषय र सरकारका बिषयमा नेपालको कम्युनिष्ट राजनीति चर्चाको
पत्रकारिता आफ्नो आचारसहिंता अनुसार चलेको हुन्छ । कुनै पनि पत्रकारले त्यही पत्रकारिताको आचारसंहितालाई गाइडलाईन मानेर समाचार सम्प्रेषण गर्नुपर्दछ । विश्वको पत्रकारिता पनि त्यही अनुसार नै चलेको हुन्छ भन्ने मान्यतामा रहेको
रामकुमारी झाँक्री भन्छिन– विधार्थी नेताको उमेरहद २८–२९ तोकौं
काठमाडौं, २३ असोज । विधार्थी नेता कसलाई भन्ने ? बहस लामो समयदेखि चलिरहेको छ । दाह्री कपाल फुलिसक्दा पनि विश्वविधालय भर्ना गरिरहने र विधार्थाीको रुपमा विधार्थी संगठनमा कब्जा जमाइहरने प्रवृत्ति
एउटा अमिलो अनुभव ‘पेट्रोल म अनी मेरो स्कुटर’
काठमाण्डौं ५ असोज । मेरो दैनिकी बिहानै उठे पछी स्कुटरको कान बटार्दै सुरु हुन्छ र अन्त्य पनि । चाडबाड नजिकिदै गर्दा बढेको पेट्रोलको मुल्य बेला बेला गोजी रित्तिदा असहज हुने
काठमाडौँ, २ असोज (रासस) / नेपालको संविधान जारी भएको तीन वर्षभित्र मौलिक हकप्रदत्त कानून निर्माण गरिसक्नुपर्ने व्यवस्थाअनुरुप कानून बनेपछि कार्यान्वयनको खुड्किलो पार भएको छ । संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार मौलिक हकका
‘मलाई छातीमा पेस्तोल ताके’ भनेर सांसद निरुपालले सरकारलाई ढाँटेकै हुन् त ?
संचार संस्थामा आवद्ध भएको तीन वर्ष पछि गएको बुधवार पहिलो पटक संसद भवन भित्र रिपोटिङ्गको लागि जाने मौका पाँए । म फोटो पत्रकार भएका कारण म कार्यरत संस्था लाइट नेपालका
सडक आन्दोलन वा अनशनबाट नभई संघीय संसद्मा नै हुनेछ डा केसीको मागको परीक्षण
काठमाडौँ, ५ साउन (रासस) / सडक आन्दोलन वा अनशनबाट नभई जनप्रतिनिधिको थलो सार्वभौम संघीय संसद्बाट नै चिकित्सा शिक्षा विधेयकलाई निष्कर्षमा लैजानुपर्ने आवाज बढ्न थालेको छ । जनादेशप्राप्त संघीय संसद्भन्दा बाहिरबाट
काठमाडौँ, १९ असार (रासस) / सरकारले विरोध प्रदर्शन गर्न पाइने भनेर निश्चित स्थान तोकिदिएपछि काठमाडौँ उपत्यकाको सवारी आवागमन र व्यापार व्यवसायमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने देखिएको छ । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा शान्तिपूर्ण